Oge na tide chere na odighi onye obula. - Ilu Bekee - Quotes Pedia
Oge na tide chere na odighi onye obula. - Ilu Bekee
Oge na tide chere onye ọ bụla; oge ochie a a mala nnọọ ama kemgbe anyị dị obere. Anyị anụwo ya kemgbe ọtụtụ afọ ma ọ bụ ugbu a ka anyị maara ezigbo uru oge.
Ọ dị mkpa ịghọta na oge a na-echere onye ọ bụla. Elekere ahụ na-egosi oge ya dịka ọsọ ya siri dị. Ọtụtụ awa na ụbọchị na-apụ ma ha echereghị nke ọ bụla. N'agbanyeghị ole ngọgodi ị nwere, ha agaghị eche.
N’otu aka ahụ, ma ihe ọma ma oge ọjọọ agafewo dịka e siri kee ha! N'otu ụzọ ahụ, ị ​​ga-amatarịrị ijide ohere na-enweghị ikwe ka oge gbapụ ka ị na-enweghị ihe ọ bụla.
Cheta na oge ga na-efe efe, ndị maara ihe ga-adị njikere mgbe niile iji hụ na ohere adịghị.
N'aka nke ọzọ, ebili mmiri ahụ na-echere ihe ọ bụla. A na-eme oyiyi ahụ na ebili mmiri ahụ n'oge nke ahụ. Ebili mmiri nke oké osimiri anaghị echere onye ọ bụla, ọ bụghị ya? Usoro ozo nke uzo di elu na ala di jigide na aga n’ihu n’enweghi onye obula.
N'otu ụzọ ahụ, oge na-aga n'ihu ife efe. Exgaghị agọ mgbaghara gị ga-abụ ihe ziri ezi ma yabụ, ọ bụ ezie na ọ baghị uru ọ bụla inye ngọpụ oge ụfọdụ ozugbo oge gafere.
Ndi maara ihe g’esi n’iru na eweputa oge n’oge dika okwesiri, ma si otua weputa ohere obula n’abia.
Ọtụtụ mgbe, anyị na-ahapụ ọrụ ụfọdụ chee na anyị ga-edozi ha ma emesịa. Mmadu aghaghi ime otú a! Ị kwesịrị nwee amamihe g’aghọta oge ahụ ga-efepụ, ị gaghị enweta oge a ọzọ.
Quotes English kacha mma
Kwuru okwu ndi Bekee mara mma
Ilu ama ama
Ntaneti N’agụ na English
Echiche ọma n'ụtụtụ n’asụsụ Bekee
Ilu n'ike mmụọ nsọ
Echiche Ngbanwe Ndụ Na Bekee
Echiche Ebumnuche Na Bekee
Ilu Kwuru na okwu
Quot na Ilu
Okwu na Ilu
Super Quotes Na English
Amamihe Kwuru na Ilu
Amamihe Amamihe na Quotes
Amamihe na Ilu
Chee echiche banyere ọtụtụ ihe; mee naanị ya. - Ilu Portuguese
Anyị niile kwesịrị ịtụ nrọ. Echiche efu na-enyere anyị aka iche n'ụzọ dị iche na iche iche…
Ndị gbachiri nkịtị anaghị ekwu ihe ọ bụla. - Ilu Spanish
Ndị gbachiri nkịtị anaghị ekwu ihe ọ bụla. - Spanish ilu kwuru okwu:
Njem nke otu puku kilomita ga-amalite site n'otu usoro. - Lao Tzu
Mgbe ị gara nke ọma, ndị mmadụ nwere ike ịhụ ọganiihu gị, mana ọ bụ naanị gị maara ihe niile…
N’agbanyeghi oke uzo ezighi uzo i jere, laghachi azu. - Ilu Turkish
Na agbanyeghị ọbụlagodi na ị jerela ogologo njem n'ụzọ na-ezighi ezi, ị ka kwesịrị ị gaghị…
Daa n’ala ugboro asaa, guzoro asatọ. - Ilu Japanese
“Daa n’ala ugboro asaa, guzoro asatọ,” bụ n'ụzọ bụ́ isi okwu atụ nke a na-ekwu iji gosipụta eziokwu…